Debanye nwa gị n'afọ mbụ nke GO! Ụlọ Ọgwụ? Ị na-eme nke ahụ bụ usoro ndebanye aha maka Antwerp Secondary Education.
Ịchọrọ idebanye nwa gị na 1e n'etiti A ma ọ bụ B? Dezie aha gị site na Friday 15 March ruo Friday 05 April 2019 site na http://meldjeaan.antwerpen.be Oge nke ị debanyere aha nwa gị n'oge a enweghị mmetụta na nkesa nke ebe ndị n'efu. Ị ga-enye ọ dịkarịa ala ụlọ akwụkwọ ise. Echefula GO! Nkà mmụta sayensị ka itinye nọmba 1!
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịdebanye aha maka afọ dị elu karịa 1e n'etiti ị gaghị enwe ike iji Meld Je Aan ma ị ga-edebanye aha n'oge oge ndebanye aha. Chọta ihe omuma banyere ịdenye aha na ụlọ akwụkwọ anyị kọntaktị.
Wednesday 13 January ruo 27 February 2019: Ụmụnna, ụmụ nwanyị na ụmụ akwụkwọ nke ụmụ akwụkwọ. Nke a bụ oge kachasị mkpa maka ụmụnna, ụmụ nwanyị na ụmụaka nke ndị ọrụ ahụ.
Friday 15 March na 05 April 2019: Oge ndebanye aha maka 1e n'etiti.
Na nke kachasị na Monday 06 May 2019 ị ga-enweta ozi-e na-ekwu ma ị nwere ike debanye aha nwa gị. Rịba ama, nke a abụghị nkwenye nke ndebanye aha! Ị ka ga-emecha akwụkwọ maka ndebanye aha.
Friday 10 Mee 04 June 2019: Oge ịkwụ ụgwọ. Ị nwere ike ịdenye nwa gị nwoke ma ọ bụ nwa gị n'ụlọ akwụkwọ anyị. Echefula ime nke a n'oge a, ma ọ bụghị na ị ga-atụfu ebe ahụ. Chọta ihe omuma banyere ịdenye aha na ụlọ akwụkwọ anyị kọntaktị.
Site na 04 June 2019: mmalite nke oge ndebanye aha n'efu.
Site na 04 Jun ruo 07 October 2019: Ọnọdụ ndị a, n'ihi na ndị mmadụ edebanyeghị aha, kenyere ndị mmadụ na listi ichere.
Enwere ike ịhapụ gị n'ụlọ akwụkwọ anyị. Obi dị anyị ụtọ inyere gị aka. Mee ọkwa ma ọ bụ site na ekwentị:
campus Ruggeveld: site na telifon na nọmba 03 / 328 05 00 ma ọ bụ site info@spectrumschool.be
campus Plantin: site na telifon na nọmba 03 / 217 43 40 ma ọ bụ site plantijn@spectrumschool.be